Umhlahlandlela Wezinhlobo Namathuluzi Okuqala Ukudala Izifundo Zevidiyo Eziku-inthanethi | Martech Zone
Umhlahlandlela wezinhlobo namathuluzi okuqala ukudala izifundo ze-inthanethi
ISonto, Ephreli 11, 2021 Lwesine, Disemba 30, 2021 Hritusharma
Uma ufuna ukwenza okokufundisa okuku-inthanethi noma isifundo sevidiyo futhi udinga uhlu olusebenzayo lwawo wonke amathuluzi namasu angcono kakhulu, uzothanda lo mhlahlandlela wokugcina. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, ngicwaninge futhi ngavivinya amathuluzi amaningi, i-Hardware namathiphu wokwenza izifundo eziphumelelayo nezifundo zevidiyo ezizothengiswa ku-inthanethi. Futhi manje usungahlunga lolu hlu ukuze uthole ngokushesha okudingayo kakhulu (kukhona okuthile kuzo zonke izabelomali) bese ushesha ngokushesha ukukhiqiza isifundo sakho esilandelayo.
Bheka, qala ngalokhu okugqugquzela kakhulu futhi ufunde ngakho ngoba ngikulungisele okuthile okukhetheke kakhulu, futhi ngifuna ukuqinisekisa ukuthi awulahlekelwa yiso nganoma yisiphi isizathu.
I-Online Video Course Recorder
Uhlobo lokuqala lwevidiyo ozoyifunela isifundo sakho noma okokufundisa ukukhombisa okubonayo kusikrini sekhompyutha yakho (amaslayidi, izinhlelo noma amawebhusayithi) bese uphawula kuso ngomsindo. Ngokobuchwepheshe yilokho okudinga utshalomali oluncane, kepha ubungozi ukuthi uma wenza njengabantu abaningi engibabona ku-YouTube, ugcina usudala amavidiyo adikayo abulalayo okungekho muntu oyoke awabuke.
Nakekela ukugcwaliseka kwamaslayidi
Sebenza kakhulu ekusetshenzisweni kwezwi lakho
Faka ukugqwayiza nemiphumela ekhethekile
Yenza ukusikeka okungenamusa kwamakhefu nezingxenye ezingadingekile
RecordCast Screen mibhalo
Isofthiwe elula nephelele kunazo zonke ongayisebenzisela abaqalayo. RecordCast Screen mibhalo inembile, icebile ngesici, futhi ayi-100% mahhala. Noma ngabe usebenzisa ini i-PC noma iMac, ungayilawula kwikhompyutha yakho kahle ngoba isuselwa kuwebhu. Yize kumahhala, akunama-watermark, akunazikhangiso, nokuqoshwa kwencazelo ephezulu. Ayikwazi ukungabikho ebhokisini lakho lamathuluzi. Ngaphezu kwalokho, inikeza isihleli sevidiyo esakhelwe ngaphakathi esinomtapo wolwazi ocebile wezinto, umbhalo, ukugqwayiza, ukumbondelana, ukuhwebelana, nezici eziningi zokuhlela eziguquguqukayo njengokuhlukaniswa, ukusondeza / ukuphuma, ukusika, njll. labo abafuna ukwakha izifundo zevidiyo noma okokufundisa okulula.
Bhalisela i-RecordCast Mahhala
Lula ilungele uma ufuna ukudala amavidiyo asheshayo, ikakhulukazi ngokuphawula kumawebhusayithi noma kwisoftware. Ikuvumela ukuthi uzirekhode njengoba ukhuluma, unikeze izinkomba, futhi ukukhombisa indingilizi enhle ongayibeka noma yikuphi lapho ubona kufanele khona. Futhi kuwusizo kakhulu ngokwabelana ngamazwana wevidiyo ngokushesha nozakwenu noma amaklayenti. I-akhawunti eyisisekelo imahhala futhi baneminikelo yebhizinisi neyamabhizinisi.
Bhalisela i-Loom Mahhala
Uma usebenzisa idivayisi ye-Apple, Ukugeleza kwesikrini yisixazululo osidingayo: ukurekhoda okokufundisa okuhle nokwenza ukuhlelwa kwevidiyo okungaconsi phansi. Ngaphandle kwalezi zici ezithuthukile, ilula ngokwedlulele futhi inembile ukuyisebenzisa, futhi inezihlungi ezinhle zomsindo nevidiyo, futhi imiphumela yemisindo mihle. Amalayisense wesikhathi esisodwa aqala ku- $ 129.
Landa isilingo sokugeleza kwesikrini
Imakrofoni zekhwalithi yomsindo
I-BOYA BY-M1 umbhobho wokuqopha omnidirectional, olungele ukusetshenziswa kwamavidiyo, owenzelwe ama-Smartphones, amakhamera we-reflex, amakhamera wevidiyo, amarekhodi omsindo, ama-PC, njll. Inekhebuli emamitha ayi-360 ubude (enojack we-6 mm ngegolide) ukuthi ixhunywe kalula kumakhamera evidiyo, noma ama-smartphones abekwe angasondeli kusipika. Izindleko: $ 3.5
ISennheiser PC 8 USB
The ISennheiser PC 8 USB kuphakanyiswa uma kwenzeka uhamba kakhulu futhi udinga ukurekhoda (ikakhulukazi i-screencast) ezindaweni ezinomsindo wangemuva ohloniphekile. Kukhanya kakhulu futhi kunikeza umsindo omuhle wakho konke okuqoshiwe nomculo; imakrofoni, ngokuba seduze komlomo, iyazwela futhi icacile ekukhiqizweni kwezwi ngokucindezela komsindo. Ifakwe imakrofoni eyisimungulu nokulawulwa kwevolumu kukhebula, ibuye isebenze kakhulu ezimweni zokusebenza okuhle. Ngokusobala, ingasetshenziswa kuphela ukuxhuma kwi-PC / Mac hhayi kuma-smartphones noma kumakhamera angaphandle. Izindleko: $ 25.02
I-Rode VideoMic Rycote
The I-Rode VideoMic Rycote imakrofoni yesibhamu esikuvumela ukuthi ithole umsindo ngendlela eqondisayo ngaphandle kokuthwebula imisindo eseceleni. Ngakho-ke, kungukukhetha okuyisibopho kuma-OUTDOOR shots lapho isihloko sihamba kakhulu, siguquka kaningi (ngokwesibonelo, uma unezipikha ze-2/3) noma ukusetshenziswa kombhobho we-lavalier akunconyelwe izizathu zobuhle. Ingabekwa kalula kumakhamera we-SLR futhi, ngama-adaptha we-smartphone, ungayixhuma nakwezingcingo noma amaphilisi okurekhoda ngesabelomali esiphansi. Izindleko: $ 149.00
Isoftware yokuhlelwa kwamahhala yevidiyo
I-OpenShot ungumhleli wevidiyo wamahhala ohambisana neLinux, Mac, neWindows. Kuyashesha ukufunda futhi kunamandla ngokumangazayo. Ikunikeza ngemisebenzi eyisisekelo yokusika nokulungisa ividiyo yakho, kanye namathrekhi angenamkhawulo, imiphumela ekhethekile, ukuhwebelana, ukuhamba kancane nokugqwayiza kwe-3D. Kunconywe uma uqala kusuka ekuqaleni futhi ufuna okuthile okungabizi kakhulu futhi osheshayo ukukufunda.
Isihleli sevidiyo seFlexClip
Kuyinto online ngokuphelele futhi software browser-based. Isihleli sevidiyo seFlexClip iza nazo zonke izici ozidingayo ukudala amavidiyo amahle, ngaphandle kwesipiliyoni esidingekayo. Hlela iziqeshana zabo bonke osayizi ngqo kusiphequluli ngaphandle kokuhlupheka kokulayishwa okungahambi kahle. Ukuphela kwemibono? Dlulisa amehlo kugalari yezifanekiso ezenziwe ngezifiso ezenziwe ngokuphelele ngochwepheshe abenzelwe umkhakha wakho. Bacabangele wonke umuntu: kusuka kumavidiyo wesiteshi sakho se-YouTube kuya kumavidiyo wemfundo noma wokuqeqesha. Kuhle uma ufuna ukwenza izivivinyo ezisheshayo.
Izindleko: i-freemium (ukuthunyelwa kwamahhala kuphela ngo-480p, bese kusuka ku-8.99 $ / ngenyanga); Ungaya ku- I-AppSumo ukuthola inguqulo yayo yokuphila kulokhu.
Shotcut isoftware yamahhala, esebenza ku-Linux, macOS, naku-Windows, imithombo yamahhala nevulekile, ekuvumela ukuthi wakhe amavidiyo, uwaphathe futhi uwathumele emazweni amaningi. I-interface iyaguquguquka futhi inembile. Imiyalo ihlelwe kahle, kunokuhlunga okuningi nokushintshwa okusebenzayo. I-Versatile, inejika elihle lokufunda futhi kulula ukuyisebenzisa. Ukuvuselelwa njalo, ukwethula izici ezintsha nokusebenza okuhle, kuthuthukisa ngokuqhubekayo ukusebenza kwayo.
Inikeza isici esiphelele esisethwe njenge-software yezentengiso. Ixhasa amafomethi amaningi ngezinqumo ezifika ku-4K. Inikezela ngezilawuli ezithuthukile zevidiyo nezomsindo, imiphumela, umugqa wesikhathi ngokuhlelwa okuningi, nokuthekelisa okwenziwe ngokwezifiso ngamaphrofayili amaningi achazwe ngaphambilini.
Lapho Ukushicilela Amavidiyo Wakho Okufundwa Ku-inthanethi
Lapho ekugcineni usuwenzile amavidiyo akho, sekuyisikhathi sokuwenza atholakale kuzithameli zakho bese uwa "thenga" kumasango (esizoxoxa ngawo esigabeni esilandelayo) lapho uhambisa khona isifundo sakho sevidiyo. Ngemuva kwalokho ake sibheke lapho singashicilela khona izifundo zethu eziku-inthanethi.
YouTube - Ayidingi singeniso ngoba iyinkundla ehamba phambili emhlabeni wevidiyo. Ine-interface elula, ikunikeza izibalo ezinhle ze-movie, futhi okuhle kunakho konke, ikhululekile ngo-100%. Ngakho-ke, yisixazululo esihle kuphela uma ungenaso isabelomali sokutshala imali noma ofuna ukusheshisa ukushicilela ividiyo. Okubi ukuthi i-YouTube izofaka izikhangiso kumavidiyo akho, futhi lokho akusizi neze ukudala isithombe sobungcweti (futhi kungashayela ngisho nomgwaqo abancintisana nabo). Ngamafuphi: yisebenzise kuphela uma ungenakho okunye ongakwenza noma uma ufuna ukwenza isiteshi se-YouTube ongasisebenzisa ukukhulisa izithameli zakho ngokomzimba. Izindleko zikhululekile.
Vimeo - Yindlela # 1 ehlukile ku-YouTube njengoba, ngokutshala imali okuncane, inika ithuba lokwenza ngezifiso izilungiselelo eziningi (ikakhulukazi ubumfihlo), ukushintsha amasethingi amanye amavidiyo eqenjini, futhi ngaphezu kwakho konke, akubonisi ukukhangisa. Kulula kakhulu ukumisa nokuphatha. Yisixazululo esifanelekile uma ipulatifomu yakho yokulethwa kwezifundo ingakunikezeli ngokusingathwa kwamahhala okungenamkhawulo, futhi ngoba (njenge-YouTube) ithuthukisa ikhwalithi ngokuya ngomkhawulokudonsa kanye nedivayisi oyisebenzisayo. Izindleko: mahhala (amasu wamasu aqala kusuka ku- $ 7 / ngenyanga anconyiwe)
Qala Ukwenza Inkambo Yakho Manje!
Uma uwuthokozele lo mhlahlandlela ojulile wawo wonke amathuluzi aphambili wokwenza isifundo se-inthanethi esiphumelelayo (futhi lokho kusiza kakhulu izethameli zakho), kusakaze. Ungalindi isikhathi eside. Zama ukudala izifundo zakho zevidiyo eku-inthanethi namuhla.
Ukudalula: Martech Zone isebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo kulesi sihloko.
Tags: i-flexclipi-headset microphoneimakrofoni ye-lavalierLulainkambo e-intanethiukuqeqeshwa kwe-inthanethiinkambo yevidiyo eku-inthanethiamathuluzi wokuqeqeshwa kwamavidiyo aku-inthanethikuvulwaukuqoshwaukuqoshwa kwesikriniukuphuma kwesikriniI-Sennheiserukudubulaimakrofoni ye-slrukuhlela ividiyoisofthiwe yokuhlela ividiyoumhleli wevidiyoumbhobho wevidiyoIsiqophi Isiqophiukuqeqeshwa kwevidiyovimeoyoutube
U-Hritusharma uyi-blogger ye-freelancer, onguchwepheshe bezinhlelo zokusebenza ze-design tech ne-design. Uzimisele ukusiza wonke umuntu ukuthi abe ngumklami njengochwepheshe. Ngaphandle kokuba yingcweti yobuchwepheshe, uHritusharma uthanda ukwenziwa kwamavidiyo nezithombe.
Ngaphandle Kwesikrini: IBlockchain Izokuthinta Kanjani Ukuthengisa Okuthonya
Isibukeli se-JSON: Ithuluzi lamahhala lokuhlaziya nokubuka ukuphuma kwe-JSON ye-API yakho